Fully decorated condo unit for sale and rent!
Fully decorated condo unit for sale and rent! location: Para mi Condo D, Hlaing township, 2nd floor, 1450 sqft unit comes with 1 master and2single bedrooms, Balcony, Facilities: Lift, Car parking, 4ACs, water heater, line phone, teak parquet, ...
Marketed by SMART HOME REAL ESTATE
~ Hall Type ~
~ Hall Type ~ 【Followed by English message】 🔎 အိမ်ခြံမြေစာရင်းအမှတ် > ( RN - 12363 ) 💥💥 ထပ်ခိုးပါဒုတိယထပ် တိုက်ခန်း အရောင်း 💥💥 နေရာ - မင်္ဂလာတောင်ညွန့် မြို့နယ် အဆောက်အဦးအမျိုးအစား - တိုက်ခန်း အလွှာ - ၂ လွှာ + ထပ်ခိုး အခန်းအမျိုးအစား - Hall ၂ ...
**​ ​ ​Condos For Sale **
**​ ​ ​Condos For Sale ** _______________________ 1. ​​Hill Top Vista၊ အလုံ (1997Sqft) M3,S1 (​5195သိန်း) 2. ​Royal ​အောင်​​ဇေယျ Residence (2260Sqft) M3,S1 (4200သိန်း) 3.​ ​​Time City၊ ကမရ (1335Sqft) M1,S1 (3340သိန်း) 4.​ ​​​​​​Twin Centro ...
Marketed by ယုန်မိသားစု အိမ်ခြံမြေ အကျိုးဆောင် ကုမ္ပဏီ
👍မရမ်းကုန်းထဲမှ ဝယ်ချင်သူများအတွက်👍 🏡🏡Sqft(3500) ကျယ်ဝန်းပြီး အိပ်ခန်း 3ခန်းပါ ပြင်ဆင်ပြီး ကွန်ဒိုလေး ရောင်းပေးပါ့မယ်။ 🏡🏡 👍နေရာကောင်း လူစည်တဲ့ နေရာလေးပါနော် 👍 👍လမ်းလည်ကျယ်တယ်နော်👍 👏#ဖွဲစည်းပုံများ# 👉 2Master bedrooms 👉 1Single ...
👍မရမ်းကုန်းထဲမှ ဝယ်ချင်သူများအတွက်👍 🏡🏡Sqft(1538) ကျယ်ဝန်းပြီး အိပ်ခန်း 3ခန်းပါ ပြင်ဆင်ပြီး ကွန်ဒိုလေး ရောင်းပေးပါ့မယ်။ 🏡🏡 👍နေရာကောင်း လူစည်တဲ့ နေရာလေးပါနော် 👍 👍လမ်းလည်ကျယ်တယ်နော်👍 👏#ဖွဲစည်းပုံများ# 👉 3Master bedrooms 👉 4Air-con 👉 ...
👍စမ်းချောင်း ထဲမှ ဝယ်ချင်သူများအတွက်👍
👍စမ်းချောင်း ထဲမှ ဝယ်ချင်သူများအတွက်👍 🏡🏡Sqft(1250) ကျယ်ဝန်းပြီး အိပ်ခန်း 2ခန်းပါ ပြင်ဆင်ပြီး ကွန်ဒိုလေး ရောင်းပေးပါ့မယ်။ 🏡🏡 👍နေရာကောင်း လမ်းသန့် ဗဟိုလမ်းနှင့် ကျွန်းတောလမ်းမ နဲ့ နီးတဲ့ နေရာလေးပါနော် 👍 👍လမ်းလည်းကျယ်တယ်နော်👍 ...
# (40×60) , 2RC * ဈေးတန်တန် အရောင်း *
# (40×60) , 2RC * ဈေးတန်တန် အရောင်း * ………………………………………………………………… # မြောက်ဒဂုံ 35/ရပ်ကွက် ပင်လုံလမ်းမဒဲ့ပေါက်လမ်း # $$$ ဈေးနှုန်း = 2600 သိန်း (ညှိနှိုင်း) ______________________________________ #3Master bed ...
Marketed by Htoo Myanmar Property Group
~ Good Place ~
~ Good Place ~ 【Followed by English message】 ⏩ အိမ်ခြံမြေစာရင်းအမှတ် > ( RN - 12373 ) 🏩 တိုက်ခန်းအရောင်းလေးမေးနေကြလို့ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်ရှင် 🏩 *** နေရာကောင်းပါနော် *** နေရာ - အလုံ မြို့နယ် အဆောက်အဦးအမျိုးအစား - တိုက်ခန်း အလွှာ - ...
👍ရန်ကင်းထဲမှ ဝယ်ချင်သူများအတွက်👍 🏡🏡Sqft(1620) ကျယ်ဝန်းပြီး အိပ်ခန်း 3ခန်းပါ ပြင်ဆင်ပြီး ကွန်ဒိုလေး ရောင်းပေးပါ့မယ်။ 🏡🏡 👍နေရာကောင်း လူစည်တဲ့ နေရာလေးပါနော် 👍 👍လမ်းလည်ကျယ်တယ်နော်👍 👏#ဖွဲစည်းပုံများ# 👉 2Master bedrooms 👉 1Single bedroom 👉 ...
LT1903005745: 1 bedroom unit for Sale in Star City
LT1903005745: 1 bedroom unit for Sale in Star City * No. of bedrooms - 1BR (1 single) * Living area - 622 sq-ft * Living room + Dining room + Kitchen * Building - A4 * fully furnished * High floor * South-East facing * Lake view * 1,000 lakhs for ...
Marketed by Your Property Finder Real Estate Agency Yangon Myanmar
Check this url: https://www.lotayaproperty.com/property-for-sale?keyword=%E1%80%95%E1%80%AF%E1%80%87%E1%80%BC%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%B1%E1%80%90%E1%80%AC%E1%80%84%E1%80%B9,%20%E1%80%9B%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%80%E1%80%AF%E1%80%94%E1%80%B9%20(Pazundaung,%20Yangon)&page=8